Chinhoyi Tree House - The Zimbabwe Bedroom - I-Airbnb
I-Orange Grove iyindawo enokuthula yaseChinhoyi. Indlu igcwele ukukhanya nendawo enengadi enkulu evulekile nezihlahla eziningi ezigcwele impilo yezinyoni. Indawo yokupaka ekhaviwe iyatholakala. Indawo yezitolo enkulu iyi-1.5 km ukusuka phansi komgwaqo. Ikhishi likhulu futhi linazo zonke izinsiza futhi kokubili ikhishi negumbi lokudlela kunezicabha eziyingilazi ezivulekele endaweni yokubhukuda. Kukhona indlu yokugezela kanye nendlu yangasese ngaphesheya kwephasishi ukusuka ekamelweni lakho. Uneminyango eyingilazi ephindwe kabili evuleleka engadini.
Itiye nekhofi kuzotholakala uma ufika. Inkonzo yasendlini ihlinzekwa ukuhlanza indlu njalo ekuseni. Kunelondolo elinomshini wokuwasha kanye nomugqa wangaphandle wokomisa izingubo. Ungase uzinikeze owakho okokugeza bese uziwashela futhi u-ayine noma ngemali encane ukuwawasha kwakho unganakekelwa. Uzohlinzekwa ngonogada kusukela ngo-6pm kuye ku-6am ukuze uphephe futhi imoto yakho uma unayo. Uma ungathanda i-wifi noma i-TV lokhu kungahlelwa ngezindleko ezengeziwe.